Xukuumadda oo mar kale Baaq ka soo saartay Biyo-la’aan ka jirta Kaamamka Barakacayaasha | Himilo Media Group
Xukuumadda oo mar kale Baaq ka soo saartay Biyo-la’aan ka jirta Kaamamka Barakacayaasha
Hargeysa, 6 Maarij, 2019 (Himilo) – Guddoomiyaha hay’adda Barakacayaasha Qaranka iyo Qaxoontiga ee Somaliland, Cabdikariim Axmed Maxamed (Xinnif), ayaa hay’adaha Caalamiga ah ugu baaqay inay gurmad deg-deg ah ka geystaan xaalad biyo-la’aaneed oo qaybo dalka ah ka jirta isla-markaana ay gar-gaar u fidiyaan dad barakacayaal ah oo biyo-la’aani haysato.
Cabdikariim Xinnif oo shalay saxaafadda kula hadlay xafiiskiisa, waxa uu faahfaahin ka bixiyey halka ay marayso hawl-gallo biyo-dhaamin iyo gurmad ah oo loo sameeyey Qoysas baro-kac oo ku nool deegaamo ka tirsan Somaliland, waxaanu halkaas ka magac-dhabay hay’ado ka soo jawaabay baaq uu hore uga diray xaaladda biyo-la’aaneed ee jirta.
“Kama hadlayno biyo-la’aanta guud ee dalka soo waajahday ee waxaanu ka hadlaynaa barakacayaasha. Waxa jawaab na soo siiyey oo aan halkan uga mahad-naqayaa shan hay’adood oo isugu jira qaar Caalami ah iyo kuwo maxalli isugu jira. Qaarkood way ku yabooheen, qaarkoona way bilaabeen qaybinta biyaha oo marka laysku daro noqonaya 308 booyadood ah,” Sidaas ayuu yidhi Cabdikariin Xinnif. Isagoo ka hadlayey taakulaynta ay hay’aduhu ka geysteen biyo-dhaamiska hore loogu yaboohay, waxa uu yidhi, “Hay’adda ARC waxay ku baaqday 50 booyado, hay’adda NRC 150 booyadood, Care International-na 108 booyadood iyo hay’adda maxalliga ah ee CCPRS oo 5 kun oo dollar bixisay.”
Cabdikariim Xinnif waxa uu sheegay inay xilligan ku guda-jiraan qaybinta biyaha hay’aduhu ku baaqeen oo uu sheegay in la gaadhsiiyey kaamamka barakacayaasha ee gobollada Bariga, isagoo sheegay in guud ahaan taakuleynta iyo qaybtinta biyaha ay ka faa’idaysanayaan 10,150 (Toban Kun, Boqol iyo Kontan) Qoys oo ku kala dhaqan gobollada Sool, Sanaag, Saraar, Saaxil iyo Togdheer.